ထိပ်တန်း 10 ဥရောပမှာတော့ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်းအချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း 10 ဥရောပမှာတော့ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်းအချက်များ
ဥရောပတိုက်တွင်ပိုက်ဆံလဲလှယ်အချက်များရှာဖွေခြင်းတစ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. ပိုကဘာလဲ, အများဆုံးသောနေရာများအတွက်, သငျသညျငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းအပေါ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ. သငျသညျအထဲကကူညီရန်, ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပအကောင်းဆုံးပိုက်ဆံလဲလှယ်ရမှတ်များစာရင်းကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ:
ကိစ္စတစ်ခုတွင်သင်အသုံးမပြုလိုပါ ATM, တမြို့အတွင်းအမျိုးမျိုးသောအစက်အပြောက်မှာပိုက်ဆံဖလှယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ရောမမြို့ Termini အနီးအများအပြားလဲလှယ်အချက်များရှိပါသည်, ရောမမြို့၏အဓိကဘူတာရုံ. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ CASA del Turista အကြံပြု, ဘူတာကနေအတိုလမ်းလျှောက်ရာဖြစ်ပါသည်.
မီလန်အတွက်ခရီးသွားဧည့်ဖွယ်ရှိသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့် မီလန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အကောင်းတစ်ဦးကငွေလဲလှယ်အချက်အရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Piazza del Duomo မှာလဲလှယ်ရှာဖွေပါ, ရုံမိနစ်ကွာဘုရားကျောင်းမှာကနေ. ခရီးသွားဧည့်သည်၏စစ်ဆေးမှုများကိုလည်းလက်ခံသည်, သူတို့ကိုသင်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်.
ပဲရစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ငှလေဲရှိပါတယျ, အဘယ်သူကိုအချို့ရာစုနှစ်တစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်ပြီ. သင်ကမြို့ရဲ့ထိပ်တန်းဆွဲဆောင်မှုတွေထဲကမှအနီးကပ်သူတို့ထဲကအတော်များများရှာတှေ့နိုငျ - Arc de Triomphe. ကျနော်တို့အကြံပြုတ APS ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်, တွင် 30 ရိပ်သာက de Friedland.
သငျသညျဘာလင်၌ရှိကြ၏လိုက်တဲ့အခါ, အဆိုပါနှုန်းထားများကောင်းသောနေရာအများအပြားပိုက်ဆံလဲလှယ်အစက်အပြောက်ရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးနှုန်းထားများများအတွက်ယူရိုပြောင်းလဲခြင်းနျဌာနခှဲတည်နေရာကိုရှာဖွေအကြံပြု. သင်ကယူရိုပါလိဂ် Center မှာသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ, အဖြစ် Alexanderplatz ဘူတာ ဘာလင်.
မြူးနစ်ကြီးမားတဲ့ခရီးသွားဧည့်သောမြို့ဖြစ်၏, ဒါကြောင့်သင်အလားအလာခရီးသွားဧည့်ထောင်ချောက်သတိထားရပါမည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျပိုက်ဆံဖလှယ်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောနှုန်းထားများရနိုင်ရှိရာအစက်အပြောက်၏ပဒေသာနေဆဲရှိပါတယ်. Ria ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးသူတို့ထဲကတဝတည်းဖြစ်ကြ၏. သငျသညျ Arnulfstrasse မှာရှာတှေ့နိုငျ 1.
ဗြိတိန်နှင့်တစ်ဦး၏မြို့တော်အဖြစ် အဓိကခရီးသွားမြို့, လန်ဒန်သင့်လျော်သောပိုက်ဆံလဲလှယ်အစက်အပြောက်နှင့်ပြည့်ဝ၏. ပေါင်သို့သင်တို့ငွေကိုဖွင့်ဖို့, Leicester Square ကိုမှာ Covent ဥယျာဉ် FX သို့မဟုတ်သောမတ်စ်ချိန်းကို Global ဖြစ်စေရှာ.
သင်တို့သည်ငါတို့၏အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါလျှင်ဘရပ်ဆဲလ်မှာအကောင်းဆုံးပိုက်ဆံလဲလှယ်အစက်အပြောက်ရှာဖွေခြင်းရှည်လျားလွန်းသငျသညျမယူသင့်တယ်. ငွေကြေးလဲလှယ်မှုတစ်ခုသည်၎င်းအားတိုက်ရိုက်စျေးကွက်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်သင်ပေးနိုင်သောနှုန်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်. သို့သျောလညျး, အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ Boulevard အဒေါ့ဖ်မက်စ်မှာ DME ပြောင်းလဲခြင်းဦးမယ် 11.
ဆွစ်အသုံးပြုမှုကိုပြင်သစ်, ဒါကြောင့်သင်ကဘေဆယ်၌သင်တို့၏နေထိုင်စဉ်အတွင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့. သငျသညျသွားလျှင် ဆွစ်ဇာလန်မှရထား, သငျသညျဖွယ်ရှိဘေဆယ်မှတဆင့်သွားပါလိမ့်မယ် Bahnhof. ကောင်းသောနှုန်းထားများကမ်းလှမ်းကြောင်းတစ် Travelex လဲလှယ်အနီးကပ်ရှိပါတယ်.
နယ်သာလန်နိုင်ငံဘဏ်များပုံမှန်အားဖြင့်သာမိမိတို့၏ဖောက်သည်ကငွေလဲလှယ်န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်, ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အဆင်မပြေရာဖြစ်ပါသည်. ဘယ်အချိန်မှာအမ်စတာဒမ်အတွက်, Damrak လမ်းရှိအပြောင်းအလဲရုံးများကိုရှာပါ. လူကြိုက်အများဆုံးတဦးတည်း Pott ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်, သင်မြို့အနီးကိုရှာဖွေနိုင်သည့် တော်ဝင်နန်းတော်.
သငျသညျဗီယင်နာအတွက်ယူရိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. လေဆိပ်နှင့်ခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်ပိုက်ဆံလဲလှယ်အစက်အပြောက်များအတွက်အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့အကြံပြုအရပ်တပါး Interchange ဖြစ်ပါသည်, စိန့်ဆန့်ကျင်ဘက်. မြေအောက်ရထားဘူတာရုံမှအနီးကပ် Stephens ဘုရားရှိခိုးကျောင်း. ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏စစ်ဆေးမှုများကိုလည်းလက်ခံကြသည်, အရာသူတို့ကိုသင်ရှိပါကအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်.
ဥရောပတစ်အားလပ်ရက်အပေါ် Going? ဤအကအဓိကဥရောပမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းကသင်၏အစီအစဉ်အပေါ် အကယ်., သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား အချိန်မှန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ထိပ်တန်း 10 ဥရောပမှာတော့ပိုက်ဆံအိတ်ချိန်းအချက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmoney-exchange-points-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ငွေကြေးလဲလှယ်မှု #ငွေလဲလှယ် #traveleurope ငွေကွေး traveltips